Ụgbọelu na-ebi akwụkwọ
Otutu nhazi isi ederede, Ricoh, Konica. High nkenke akpaka usoro. Enwekwukwa mgbochi nkukota usoro. Jiri Ikanam oyi okpomọkụ gwọọ technology, ogologo ọrụ ndụ, ala oriri ike. Ọgụgụ ọgụgụ ink larịị usoro.
Nọnyere gị ụzọ ọ bụla nke ụzọ.
Atọ, bipụta ekwentị mkpanaaka s ...
Product oke Model ...
Product oke Mo ...
1. Ezi ink bụ isi ihe na s ...
Guangzhou MSERIN Technology Co.,. na ihe nkwakọ ngwaahịa tii. Ọchịchọ maka ibipụta agba bụ isi, na-elekwasị anya na R&D, n'ichepụta na ịkwalite akụrụngwa mbipụta dị elu, nkwụsi ike, na ọnụ ahịa dị irè.
Mwepụta ihe ntanetị ọhụrụ nke UV UV - 9060
Jenụwarị / 10/2021
Innovation maka akụkọ ihe mere eme mbipụta dijitalụ. Banye na Market Global Na UV Ndị na-ebi akwụkwọ. Mserin ndị na-ebi akwụkwọ dị ọhụrụ, enwere nnukwu ụlọ obibi akwụkwọ zuru ụwa ọnụ iji kpatụ. Ahịa a na-ebugharị site na nnukwu uto na mgbidi mgbidi ụlọ na ụlọ ọrụ Mgbasa ozi. T ...
Ikanam UV Printer Solution na ekwentị Case Ubi You're na-nri ebe maka ekwentị ikpe-ebi akwụkwọ igwe. Agbam ume na ekwentị gị Case Printing Business Ugbu a! O doro anya na ịchọta ya na Mserin. Anyị bụ ndị na ngwa nbipute UV na Guangzhou, China. Ọhụrụ igwe anya mara coo ...
Ihe UV Printer UV na Ugbo Acrylic
Acryli nwere ezigbo akwụkwọ obibi na ederede yana foto ndị e biri ebi nwere agba na-enwu gbaa, ya mere a na-ejikarị ya eme ihe nrịba acrylic, okpokolo osisi, mbadamba ngosi, mpempe ụzọ, akara okporo ụzọ, mbadamba mgbasa ozi, wdg. ngwaahịa ...